Dingana fandrakofana PVD sy fampandrosoana teknolojia mifandraika amin'izany
PVD no fanafohezana ny Deposition etona ara-batana (Fametrahana etona ara-batana) amin'ny teny anglisy. Izy io dia manondro ny fampiasana herinaratra ambany, haitao avo lenta ankehitriny, ary ny fampiasana famoahana entona hanaovanaTanjonaAtsofohy sy aody ionize ny akora etona etona etona, ary ampiasao ny fanafainganana ny sehatry ny herinaratra hametrahana ireo akora misy etona sy ireo vokatra misy ny valiny ao amin'ilay workpiece.
Ny teknolojia PVD dia niseho tamin'ny faran'ny taona 1970, ary ny sarimihetsika voaomana dia manana tombony amin'ny hamafin'ny avo, coefficient ambany tohana, fanoherana tsara akanjo sy fitoniana simika, sns..Ny fampiharana mahomby voalohany teo amin'ny sehatry ny fitaovana fanapahana vy haingam-pandeha dia nahasarika ny sain'ny indostrian'ny mpamokatra eran'izao tontolo izao. Mandritra ny famolavolana fitaovana fampitaovana avo lenta sy azo itokisana, izy ireo koa dia nanao fanosotra lalina kokoa tamin'ny karbida simenitra sy fitaovana fanapahana seramika. Fikarohana Layer Application.
Raha ampitahaina amin'ny fizotran'ny CVD,Dingana PVDNy mari-pana fanodinana dia ambany, ary tsy misy fiatraikany amin'ny tanjaky ny fitaovam-pitaovana rehefa ambanin'ny 600 temperature ny mari-pana; ny fihenjanana anaty ao amin'ny sarimihetsika dia ny fihenjanana mampihetsi-po, izay mety kokoa amin'ny firakotra ny famaritana karbôna sy ny fitaovana sarotra; ny fizotran'ny PVD dia tsy misy fiatraikany ratsy amin'ny tontolo iainana, ary mifanaraka amin'ny torolàlana momba ny fampandrosoana ny fanamboarana maitso maoderina. Amin'izao fotoana izao, Ny teknolojia famonoana PVD dia be mpampiasa amin'ny fitsaboana amin'ny fametahana ireo famaranana karbida vita amin'ny simenitra, fandavahana, dingana fandavahana, fandavahana lavaka solika, reamers, paompy, fampidirana fikosoham-bary, fitaovana miendrika manokana, fitaovana welding, Sns.
Ny teknolojia PVD dia tsy manatsara ny fifamatorana eo amin'ny sarimihetsika sy ny fitaovana matrix tool, fa ny firakotra mifono kosa dia nivoatra tamin'ny TiN ka hatramin'ny TiC, TiCN, ZrN, CRN, MoS2, TiAlN, TiAlCN, TiN-AlN, CNx, DLC, ary ta-C. manarona.
Ho an'ny tanjona kendrena, misafidy lasibatra Shaanxi Zhongbeitai!
Précédent: Fepetra takiana mifangaro ho an'ny fahadiovan'ny tanjona kendrena
Manaraka: Plansee dia mandefa tanjona kendrena MoNa hanatsara ny fahombiazan'ny sela CIGS